Toriteny Alahady 25 Febroary 2018 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
OMEO IZAY ANGATAHAN’ANDRIAMANITRA
Hevitra roa no hifampizarana amintsika amin’ireto tenin’Andriamanitra ireto. Ny voalohany dia mikasika ny fiovan’i Jesoa tarehy ary ny faharoa dia manamafy ny lohahevitra izay aroson’ny Fiangonana androany dia ny hoe: omeo izay angatahan’Andriamanitra.
Isaky ny alahady faharoa amin’ny karemy dia mamaky ny fiovan’i Jesoa tarehy isika aty am-piangonana, amin’ny taona A dia Md Matio, taona B Md Marka ary ny taona D dia Md Lioka. Amin’izao taona B izao dia i Md Marka no arahantsika fa ny faha 6 ny volana Aogositra isika dia mankalaza ny fiovan’i Jesoa tarehy, izany hoe in-droa isa-taona isika no mamaky izany. Ny fiovan’i Jesoa tarehy dia fanomanana ny Apôstoly hiatrika zavatra mafy. Nentin’I Jesoa nitokana I Joany sy I Jakoba, izy ireo dia vavolombelona. Tamin’ny nananganan’i Jesoa ilay zazavavy roa amby folo taona izy telo lahy no nahita ny nanaovana izany, izy ireo ihany koa dia nentin’i Jesoa nitokana tamin’izy hiady aina ary niova ny endriny tamin’io fotoana io. Androany io fiovana io, lasa fotsy manjopiaka tahaka ny ora-panala ny tarehin’i jesoa ary voalaza fa tsy misy mahavita fotsy madio tahaka an’izany eto ambonin’ny tany. Niondrika teo anatrehany ireo mpianatra ary nisy olona roa dia I Moizy sy Eli niresaka tamin’I Jesoa, misy dikany io; I Moizy dia tandindon’ny lalàna satria ny lalàna dia mahakasika ny mesia izay ho avy ary I Eli dia tandindon’ireo mpaminany rehetra izay efa nilaza mialoha mikasika ny Mesia ihany koa. Samy olon’ny tendrombohitra izy roalahy ireo, I Moizy dia nihaona tamin’Andriamanitra tany an-tendrombohitra nandritra ny efapolo andro nandray ny lalàna ary i Eli ihany koa dia tany an-tendrombohitra no nandray ny hafatr’Andriamanitra. Ny tendrombohitra dia toerana avo hihaonana amin’Andriamanitra, izay no anton’ny tilikambo. Ny tilikambo dia tandindon’ny tendrombohitra hihaonana amin’Andriamanitra, izay no dikan’ny tendrombohitra; toerana niovan’i Jesoa tarehy, hihaonana amin’Andriamanitra, nanomezan’i Jesoa ny lalàna.
Ny andro fankalazana ny niovan’i Jesoa tarehy dia manome hery fa tsy maintsy hiatrika ny fijaliana isika manome herim-po fa hahita ny voninahitr’Andriamanitra isika rehefa avy miatrika fijaliana, mampianatra antsika ihany koa fa izao fotoana izao dia fotoana fibebahana sy fiovana, miezaka isika haka tahaka an’i Jesoa miova endrika. Ny fotoanan’ny karemy dia fotoana lehibe ho an’ny fiangonana hivavahana misimisy kokoa sy hanaovana asa fiantrana, hifadian-kanina. Rehefa vitantsika izany dia io isika lasa mitovy amin’I Kristy izay miova endrika androany. Raha araka ny foto-kevitry ny Fiangonana dia efa antitra I Abrahama ary tsy niteraka, toa izany koa I Sarah vadiny efa vaviantitra. Samy tsy nino izy mivady fa mbola hanan-janaka fa rehefa tonga tokoa ny fotoana dia teraka zazalahy I Sarah, dia nantaony hoe Isaaka no anarany izay midika hoe zanaky ny fihomehezana satria tamin’izy telo lahy nilaza izany dia nihomehy I Sarah. Nangatahan’Andriamanitra atao sorona ary ny zaza, fomba fanaon’ny firenena manodidina an’Israely io, mamono ny zanany hatao sorona ho an’izay Andriamanitra tompoiny. Notsapain’Andriamanitra I Abrahama hanao sorona ny zanany, fa nanaiky I Abrahama na dia nalahelo aza. Rehefa tonga tamin’ny toerana hanaovana ny sorona dia nofatoran’i Abrahama ny zanany tokana dia napetraka teo ambony ôtely, alaivo sary an-tsaina ny alahelo lehibe hoe hamoy sy hamono anaka, dia tsy nampoiziny anefa fa nosakanan’Andriamanitra izy tsy hamono ny zaza ary efa hitany fa nanaiky azy hatramin’ny farany I Abrahama. Ny vokany ary dia lasa maro taranaka sy nahazo fitahiana lehibe I Abrahama. Andriamanitra dia efa nahafoy ny zanany tokana ho antsika, I Abrahama nahafoy ny zanany tokana ho an’Andriamanitra ary nahazo valisoa tsy takatry ny sainy izy noho izany, ary isika rehetra izao dia vokatr’io faneken’I Abrahama an’Andriamanitra io; ho tonga rain’ny firenena maro ianao; zavatra sarotra io nangatahana io.
Dia eto isika sy ilay hoe: omeo izay angatahan’Andriamanitra fa tsy ampoizintsika ny vokany, araky ny tsy hahafoizantsika no tsy hahafoizan’Andriamanitra ho antsika koa. Ny fotoana ohatra, milaza fa tsy manana fotoana isika rehefa misy fivoriana fa raha tsy omen’Andriamanitra tokoa moa isika dia ahoana? Mila mahafoy fotoana ho an’Andriamanitra isika. Misy amintsika tena miomana mialoha mihintsy hivavaka rehefa alahady, raha tiantsika ny hahazo fahasoavana manokana amin’Andriamanitra dia omeo izay angatahany. Tsy maintsy misy ezaka ataontsika hanova ny fahazarantsika indrindra amin’izao karemy izao, aza manao ho tsy manam-potoana izany fa mahafoiza, ny tenanao koa dia angatahan’Andriamanitra amin’ny raharaha isan-karazany ato am-piangonana. Ny fotoanan’ny karemy dia fanehoana fitiavana ny namana , fanaovana asa fiantrana ho an’ny sahirana. Fotoana fahafoizana izao dia omeo izay ilain’Andriamanitra mba hananantsika fahasoavana avy aminy satria izy rehefa manome dia tsy manao kajy fa mahafoy tanteraka, ny fotoananao, ny tenanao, amin’izay isika hiova tarehy toa an’i Jesoa ary amin’izay isika dia hahatsapa fahasambarana.
Alahady – 05/10/2014 – Toriteny
Alahady – 02/11/2014 – Toriteny